Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 06
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 06
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 06
Ruka anoisa kukosha pana Jesu seMunhu akakosha.
Ruka anotiudzawo kuti tinofanira kuva vanhu vakaita sei kuti tibatire Jesu.
Nomwe chiverengo chekuzadzisa. Vhiki rine mazuva manomwe. Hamuna kutenderera kwakaberekwa kuripo kwemazuva manomwe pamasikirwo ezvinhu.Bhuku raGenesisi rine mazuva manomwe akasikwa nawo hupenyu naMwari. Ndicho chega chikonzero chinotipa kuti tive nemazuva manomwe pavhiki. MaFrench mukati memazuva avo avaive vasina vamwari makore akapoteredza 1700 vakaedza kuita vhiki rine mazuva gumi asi vakakundikana. Hakuna munhu akaedza kushandura vhiki raMwari remazuva manomwe akabudirira.
Tanhatu chiverengo chemunhu. Munhu akasikwa nezuva rechitanhatu.
Munhu ane zvivi mukurarama kwake saka haana kukwanira nechikamu chimwechete. Kutambudzika kwese uye kushungurudzika kuri muhupenyu kunobva pakuvepo kwezvivi.
Saka rudzi rwevanhu runoda nzira itsva yekufuna nayo kuti vagone kurarama munzvimbo ino izere zvivi.
Ruka anozarura pfungwa itsva yekuti Mwari achafuratira maJuda otarisana nemaHedeni. Asi maHedeni aya anofanira kudzidza kufunga nenzira inodiwa naMwari. Mwari anoda kutisuka kuzvivi orarama mukati memoyo yedu kuti atishandise kuti tive zvikamu zveMuono wake Mukuru, zano rake rakavanzwa reruponeso riri kupotsana nenyika zviri nyore.
Ruka ane makwara mazhinji akavanzwa muEvhangeri rake anoyanana nekereke yemaHedeni.
Nguva dzemakereke manomwe, dzakabata makore anodarika zviuru zviviri, ndicho chakavanzika chikuru icho maJuda akapesana nacho muTestamente Yekare.
Chaputa 6 inotangira pavadzidzi vaive nenzara saka nekudaro vakatora zvitsama zvehura kubva mumunda vakadya. VaFarise, vaive vakavenga Jesu, vakabva vawana mukana wekutaura kuti vaive vashanda nemusi wesabata saka nekudaro vaive vaputsa murairo wemaJuda wakauya naMosesi.
RUKA 6:1 Zvino nomusi wesabata wakafamba napakati peminda yezviyo; vazidzi vake vakatanha hura, vakadya, vachizvipukuta namavoko.
RUKA 6:2 Zvino vamwe vaFarise vakati kwavari: munoitireiko zvisina kutenderwa kuita nomusi-wesabata?
Saka Jesu akavaudza chiitiko chiri muBhaibheri apo Davidi akanga aziya akadya chingwa chekuratidzira chaive panzvimbo tsvene chaitenderwa kudyiwa nevaprista chete. Mwari haana kubvira aranga Davidi nekuda kwekuita uku.
RUKA 6:3 Jesu akavapindura akati: Ko, hamuna-kurava here zvakaitwa naDavidi, musi waakanga aziya, iye navakanga vanaye;
RUKA 6:4 Kuti wakapinda mumba maMwari, akatora zvingwa zvokuratidza, akazvidya, akapa vo vakanga vanaye, izvo zvakanga zvisina kutenderwa kudyiwa, asi navaprista voga?
Jesu aive abata vaFarise. Vaisada kubvuma kuti nei Mwari akatendera Davidi kuita izvi akasamuranga. Zvakadaro, havana kuziva kuti nei Mwari akatendera izvi. Saka nekuda kweizvi vaitobvuma kuti vaisaziva zvinoreva Magwaro. Vaisadawo kuita izvozvo.
Kuita kwaDavidi muTestamente Yekare kwaive mumvuri wezvaizoitwa naMesiasi kuTestamente Itsva.
Mumwe nemumwe wevaporofita vekuTestamente Yekare akaita chikamu chehushumiri hwaKristu, Mesiasi aiuya.
Saka Davidi akabva azodzwa kuva Mambo nemuporofita Samueri achiri mukomana asi haana kukwanisa kuva mambo kusvikira hupikisi, mambo Sauro, auraiwa.
Kristu akazodzwa kuva Mambo neMweya Mutsvene wakaburuka kubva kudenga ukaramba uri paari, paakabuda murwizi rweJorodani apedza kubhabhatidzwa naJohane Mubhabhatidzi. Asi achagara pachigaro saMambo akagadzwa apo muvengi, chikara nemuporofita wenhema vakandwa mugungwa remoto pamagumo enguva yeKutambudzika kukuru. Ipapo Jesu achatonga saMambo munguva yeMereniyamu.
Pakati pezviitiko zviviri izvi Jesu ndiye muPrista mukuru ane rudzi naMerkisedeki anoita kuti tiwane ruponeso.
Muprista mukuru wekutanga Aroni akagezwa akazodzwa nemafuta nemuporofita Mosesi.
EKSODO 40:12 Zvino uswededze Aroni navanakomana vake kumukova wetente rokusongana; ugovashambidza nemvura.
13 Ipapo ufukidze Aroni nguvo tsvene, ugomuzodza nokumutsaura, kuti andishumire pabasa rovuprista.
VAHEBERU 5:5 Saizvozvo vo Kristu haana kuzvikudza iye, achiitwa muprista mukuru, asi wakakudzwa naiye wakati kwaari; Ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakakubereka.
6 Sezvaanoreva vo paneimwe nzvimbo achiti: Ndiwe Muprista nokusingaperi une rudzi naMerkisedeki.
Jesu akagezwa nemuporofita Johane Mubhabhatidzi murwizi rweJorodani akazodzwa neMweya Mutsvene paakabuda mumvura. Kuita uku ndiko kwaizotanga hushumiri hwake semuPrista.
Sezvo Davidi akaita hushumiri hwaKristu saMambo, saka Davidi akatenderwawo kuita basa remuprista panguva iri pakati pekuzodzwa kwake uye kugadzwa kwake kuva mambo makore mazhinji aizouya. Pamusoro pazvose, Davidi aiita hushumiri hwaKristu.
Nekutora Jesu semwanakomana wake, Josefa akaunza Jesu murudzi rehumambo rwaDavidi saka nekudaro Jesu aizivikanwa seMwanakomana waDavidi, saka aive akafanirwa nenhaka imwe seyakawanikwa naDavidi.
I PETRO 1:10 Ruponeso urwu rwakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo navaprofita, vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi:
Mweya waKristu waive mune umwe neumwe wemaporofita emuTestamente Yekare, uchiratidzira hunhu hwehushumiri hwaJesu hwenguva yaizouya. Davidi aive zvese mambo nemuporofita sezvo ane zvimwe zvinhu zvaakaporofita.
Semumwe muenzaniso, Josefa aive mwana akadiwa nababa vake Israeri, asi akavengwa nevakoma vake. Akaiswa mutorongo nembahva mbiri kuEgipita. Mubiki wechingwa akafa asi mudiri wewaini akararama.
Munhu Jesu akadiwa naMwari Baba asi akavengwa nevakoma vake maJuda. Akasungwa pamuchinjikwa nembahva mbiri, mumwe wavo akafa akaenda kuHadesi, asi mumwe akaenda kuParadiso.
RUKA 6:5 Akati kwavari: Mwanakomana womunhu ndiye Ishe wesabata.
Apa Jesu akavaudza chinhu chikuru. Maporofita haana kuratidzira chete zvaizova hupenyu hwaKristu asiwo zuva resabata, raive rakaera kumaJuda, kwaingove kuzviratidza kwehushumiri hwaKristu.
Sabata zvinoreva zororo.
GENESISI 2:3 Mwari akaropafadza musi wechinomwe, akauita mutsvene: nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose, raakanga aita nokusika iye Mwari.
Mwari akaropafadza zuva rechinomwe nekuti Mwari akazorora naro, kwete nekuti raive zuva rechinomwe. Kukosha kwaive kusiri pakuti zuva rechinomwe (Mugovera) asi pakuzorora.
Asi kuzorora zuva rimwechete pavhiki kubva pakushanda kwavo nesimba uye kutsvaga pfuma yemaoko zvaive zvisiri izvo zvaive mupfungwa dzaMwari nekuti izvi zvaive zvisingaiti kuti maJuda vave vanhu vari nani.
Kuzorora kwesabata kwaive kwakaitirwa kusiya zvivi uye kusiya kusatenda.
VAHEBERU 4:9 Zvino zororo resabata revanhu vaMwari richipo.
VAHEBERU 4:10 Nokuti uyo wakapinda muzororo rake, wakazorora iye amene pamabasa ake, saMwari panaake.
Hazvina zvazvinobatsira kushanda mazuva matanhatu mozorora zuva rechinomwe, modzokera kunoshanda zve.
Izvi handizvo zvakaitwa naMwari. Akashanda akapedza kusika kwese akazozorora, haana kuzodzokera pamabasa ake ekusika zvakare nekuti aive apera.
Tanhatu chiverengo chezvivi. 666 ndiye munhu wezvivi. Kushanda mazuva matanhatu zvinomiririra mabasa edu ezvivi. Petro aive nemushonga wekurapa zvivi.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene.
Ropa raJesu rinotisuka kuzvivi. Zvino Mweya Mutsvene, Hupenyu huri muRopa rake, hunouya mumoyo yedu kuti hushande matiri hobvisa rudo rwese rwekuita zvakaipa. Rubapatidzo rweMweya Mutsvene runoisa Jesu pakubata mukurarama kwedu tosiya mabasa ezvivi ataisimboita.
Saka zuva resabata remaJuda (risingavaiti vanhu vari nani) raingova mumvuri werubapatidzo rweMweya Mutsvene runotiita vanhu vari nani, nekuti ipapo Jesu anobva ava Ishe wehupenyu hwedu, orarama mukati medu kuti aite kuti tiite zvaanoda kuti zviitwe muTestamente Itsva.
VAHEBERU 10:1 Nokuti murayiro zvauri mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinovuya,
Sezvaakararama hushumiri hwake hwenguva yaizouya panyika muhupenyu hwemaporofita emuTestamente Yekare.
Saka zuva resabata raizoshanduka kubva pakuva zuva pavhiki, roita rubapatidzo rweMweya Mutsvene apo Mwari anozokurudzira kereke yemaHedeni kuti itevere zano rake reruponeso mukati meshanduko dzezviitiko zvenguva nomwe dzemakereke.
Apo isu tinosarudza kubva pasimba redu rekuzvisarudzira, tinopa kuda kwedu kwaari sechinhu chimwechete chatirinacho chatingamupa, tomukumbira kuti atonge nekutungamirira hupenyu hwedu nenzira inodiwa naMwari, ipapo anenge ava Mambo wesabata pachokwadi, ndiro wo zororo redu kubva pazvivi nekusatenda.
Zvino vaFarise nevanyori vakaedza kumubata zvakare. Vaizomupomera pamusoro pekushanda musi wesabata kunyangwe akaporesa varwere.
MaJuda aive arasikirwa nechinhu chikuru. Kusashanda musi weMugovera chaive chiratidzo chekuti munhu anosiya mabasa ake ezvivi. MaJuda muTestamente Yekare havana kukwanisa kuramba rudo rwekuita zvivi. Nzira yega yekusiya kuita zvivi kuva naJesu achirarama mumoyo yedu achitishandisa, kuita kwatinodaidza kuti rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Ipapo hatizoiti zvatinoda isu, sezvo mabasa edu ese anenge achidzorwa naJesu. Ipapo pega ndipo patinogona kukwana muhurongwa hwaMwari hwakavanzika hweruponeso paanotungamira nekutichengeta mukurarama kwedu kwemazuva ese. Izvi zvega zvinogona kuitika mukubata kweTestamente Itsva kwakaitirwa maHedeni mukati menguva nomwe dzemakereke.
RUKA 6:6 Zvino neimwe sabata wakapinda musinagoge, akadzidzisa; zvino kwakanga kunomunhu ipapo wakanga anoruvoko rworudyi rwakavonyana.
7 Vanyori navaFarise vakamutarisa, kuvona kana angamuporesa nomusi wesabata, kuti vawane pavangamupomera mhosva napo.
8 Asi iye wakaziva mifungo yavo; akati kumunhu wakanga anoruvoko rwakavonyana, simuka umire pakati pavanhu, akasimuka akamira.
9 Zvino Jesu akati kwavari; ndinokubvunzai shoko iri; Zvakatenderwa here kuita zvakanaka kana zvakaipa nesabata, kuponesa munhu kana kuvuraya?
10 Ipapo akaringa ringa achivatarisa vose; akati kwaari: Tambanudza ruvoko rwako. Akadaro ruvoko rwake rukavandudzwa.
Izvi zvakagumbura vaFarise. Jesu aive avakurira. Vaisaedza kutevera pakuva nesimba seraaive naro. Akavaita kuti vataridzike sevanhu vakakundwa, uyu kuzvikudza kwavo kwaive kwanyangadzwa kwakaita kuti vade kutsiva. Asi Jesu aive asina chaaive aita kuti vamutsive. Aive angotaura mashoko.
Chimwe chinhu chakagumbura vaFarise ndechekuti izvi ndizvo zvinoitwa nevaprista vavo musi wesabata wega wega pavanoita mabasa avo echitendero. Maprista aizotaura zvakanyanya. Asi Mwari aivatendera kuita izvozvo. Jesu aive asina kuita zvakawanda kukunda zvaiitwa nevaprista vavo.
Tichiwedzera maprista vaishanda musi wesabata pavaivesa moto nekuuraya mhuka pavaipira nekupisa zvipiriso. Vaizozunguzira zvipiriso zvekuzunguzira uye kutakura zvipiriso zvinorema vachizvisimudza mudenga nekumativi zvinomiririra muchinjikwa. Vaifanirawo kucheka nyama yemhuka vodzibvisa paaritari voita kuti nzvimbo iyoyo isare yakachena. Saka maprista aishanda nesimba musi wesabata.
Pamurawo, vaFarise vaive vakarasikirwa zvikuru kupfurikidza kupupurira basa rakaoma iri rese raiitwa nemaprista asi vachinyunyuta nemashoko akataurwa naJesu.
RUKA 6:11 Zvino vakatsamwa kwazvo, vakarangana vose kuti Jesu vangamuitei.
Asi nyaya huru apa ndeyekuti vaFarise vaive vaitasangano raiteerera mirayiro yevanhu. Vaisada Shoko raMwari rechokwadi nekuti raive rakasiyana nezvinhu zvavaive vajaira. Vaizotambira zvinhu zvaienderana nezvavaive vagara vachitenda mazviri. Vaisada kushanduka. Vaive vasina rudo rwekutambira zvinhu zvaive zviri nani kukunda zvavaive vagara vachitenda mazviri.
Saka pachinzvimbo chekudzidza kubva kuna Jesu, aiziva zvakawanda kukunda ivo, vakasarudza kumuparadza sezvo aive avaburitsa pachena kuti vaive vari pasi pake zvakanyanya. Vaisafarira kudzikisirwa kwaiitwa kuzvikudza kwavo.
Kusada kushanduka zvinoreva kuti kuenderera mberi tichirarama nenzira yatajairira. Hatidi kushanduka.
Ndiko kutadza kukuru kuri mumasangano edu isu vanhu ezvitendero. Nhasi tinoda tsika dzemakereke, kwete Bhaibheri. Ndicho chikonzero nei tichitenda kuti vazivi vekumabvazuva vakapinda muchidyiro ivo vakapinda mumba.
Asi tinoda tsika yekupanana zvipo kukunda kuda kwatinoita zvakanyorwa muBhaibheri Shoko raMwari.
RUKA 6:12 Namazuva iwayo wakaburuka kugomo kundonyengetera, akapedza vusiku bwose pakunyengetera kuna Mwari.
Apa Jesu aive akufanira kuisa chikwata pamwechete. Hutungamiri hwevanhu hwaive hwakurisa zvekuti akasarudza kupedza husiku ihwohwo achinamata. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakaomarara chaakaita zvichibva pakutarisa kureba kwemunamato waakaita, unotaridza basa guru rine vatungamiriri mumakereke. Ndiyani angashandiswa naMwari asingazvisimudziri zvichibva pabudiriro yaanenge atenderwa naMwari kuti aite? Ndiyani angavimbwe naye naMwari kuti atungamirire vamwe kupinda muhurongwa hwaMwari hwakarurama, apo kuneta kwedu kukuru kuri pakuti hatione kuti Mwari anoita zvinhu nenzira yakasiyana neyatingazviita nayo. Sevanhu tinotanga kuzvivimba uye kuvimba nematarenta edu zvakare kupfugamira hurongwa hwevanhu, sezvakaitwa naAroni paakavaka mhuru dzendarama nekuti izvozvo zvakamuita kuti ave nembiri. Zvido zvevanhu uye kuzvikoshesa ndivo vavengi vakuru vaMwari. Chakanaka chega pazvido zvemunhu ndokunge munhu akafa kuzvivi zvake nezvido zvemoyo wake.
And the only way that we will find God’s will is by prayer and obedience to His Word. Nzira yega yatinogona kuwana nayo kuda kwaMwari kunamata uye kuteerera Shoko rake.
Asi mhinduro yatinowana kubva kuna Mwari yakasiyana kwazvo nezvatinotarisira. Hatifaniri kunamatira kuzadzisa tariro dzedu isu nekuti izvi hazvina mubairo wenguva refu. Tinofanira kufa kuzvido zvedu. Nhasi uno vanhu vari kukoshesa kuzvitora mifananidzo “maserufi” nekuzvifungira ivo vega, uye kuzvikudza. Iyi haisi nzvimbo yakanaka kuti tiwanikwe tiri.
RUKA 6:13 Zvino kwakati kwaedza akadana vadzidzi vake; akasanangura kwavari vane gumi navaviri, vaakatumidza zita rokuti vaapostora.
Dambudziko guru ratirinaro nhasi nderekuziva kuti Jesu akasarudza ani.
Kereke yekutanga yaisazosarudza Sauro aive muurayi mukuru wekereke, kuti atsive nzvimbo yaJudasi. Jesu paakakwira kudenga, vapostora vakasarudza Matia kuti atsive chinzvimbo chaJudasi, asi Matia haana kuzobvira ataurwa muBhaibheri zvakare. Mwari akasarudza Sauro, akamutumidza rimwe zita kuti Pauro akabva ava muKristu mukuru munguva nomwe dzemakereke nekuti akanyora 29% dzeTestamente Itsva chikamu chakakura kukunda vamwe vanhu vose vakanyora. Zvikurusei, maKristu makuru ose venguva dzakazotevera vakatenderana naPauro kana vachiti dzidziso dzavo ndedzechokwadi.
Saka kubva pakutanda, apo maKristu epamusoro, vadzidzi, pavaisarudza munhu kuti atungamirire kereke vaitadza.
Nei? Mwari anofunga zvakasiyana nezvinofungwa nevanhu.
Saka dambudziko guru pahutungamiri hwemweya pakereke nderekuti vanhu, vasingazivi hurongwa hwaMwari hwakarurama, vanosimbirira kusarudza vanhu vanotungamirira. Kereke yeRoman Catholic yakadzinga Martin Luther, mumonk wavo mukuru. Vaisazomusarudza semutungamiri wavo.
Hatingogone kusiira Mwari nyaya dzehutungamiri kuti adziite ega. Tine nzara yekuvaka kereke dzedu dzakarongwa nevanhu. Ndicho chikonzero nei makereke achikundikana, uye pakupedzisira, munguva yeRaodikia, nguva yekereke yekupedzisira, musoro chaiwo wekereke Jesu Kristu, akamira kunze kwekereke. Tinokwanisa chete kufungidzira kuti anofungei nemunhu ari kutungamirira ari mukati mekereke, achizviti ndiye musoro wekereke. Vakuru vamwechete ivavo vakamuramba, iye Shoko raMwari.
RUKA 6:14 Simoni waakanga atumidzawo kuti Petro, naAndrea, munun’una wake, naJakobo, naJohane,naFiripo, naBartoromeo,
15 NaMateo, naTomasi naJakobo mwamakomana waArfeo, naSimoni, wainzi Zerote.
16 NaJudasi mwanakomana waJakobo; naJudasi Iskarioti, wakazomupandukira.
Iyi iyambiro kwatiri tese. Aivepi muparadzi akanyangadza nhorondo yekereke? Ipapo pakati pevakuru vekereke.
Kudonha kwake kukuru kwakakonzerwa nei? Mari.
Vakuru vekereke vakapfuma. Iri rakatanga kare kuva dambudziko mukuvakwa kwekamakereke. Neimwe nzira zvinoita sezvakanaka, kuti Mwari ari kupa vanhu vake mubairo nekuda kwekubata kwavo kwakatendeka. Asi mune kumwe kutenda kwakawanda kwapararira mumakereke kwekuti tinotadza kuziva kuti vatungamiri vakatendeka ndevapi. Marudzi avo mazhinji anoita seanobudirira. Zvakare zvimwe zvitenderowo zvine vatungamiri vakapfumawo zvakare. Kune vakawandisawo vasina zvavanotenda mazviri vakapfuma. Saka kupfuma hahusi humbowo hwekutendeka pakushandira Mwari.
Vafundisi vangani vari kugara mudzimba dzine hutefe-tefe? Vatungamiri vangani vemakereke vanofamba nemotokari dzechimanje-manje dzinodhura? Vane dzimari dzakawanda kumabhangi? Vanoita “bhizimisi remhuri” nevakadzi vavo kana vanakomana vavo kana vakoma vavo kana nehama dzavo vachibatsirana sevaparidzi kana vafambisi vezvinhu mukereke? Zvakakosha kwavari kuti mari irambe ichitenderera mumhuri mavo. “Kereke” yava bhizimisi guru kwazvo.
Saka zvinhu hazvina kushanduka mukati memakore 2 000. Nguva yakatsamwa Jesu kwazvo ndepaakadzinga vaitengeserana muTembere. Vanhu ava vaiita mari zhinji nechitendero. Tarisai kuti makereke makuru akapfuma mangani ariko nhasi uno, zvinhu zvese zvisati zvasvika pakuparadzwa munguva yeKutambudzika kukuru.
RUKA 6:17 Akaburuka navo akamira pakati chechetere, navadzidzi vake vazhinji; navanhu vazhinji-zhinji, vaibva Judea rose neJerusarema, napamhenderekedzo dzegungwa reTire neSidoni
18 Vakanga vavuya kuzomunzwa nokuporeswa hosha dzavo. Navakanga vachitambudzika nemweya yetsvika vakaporeswa.
19 Vanhu vazhinji vose vakatsvaka kumunyangata; nokuti simba rakabuda kwaari rikavaporesa.
Jesu, seMunhu, aifara kuponesa vanhu kubva kuhurwere, kuvasunungura kubva kumadhimoni, nedzimwe ndudzi zhinji dzehosha.
Izvi zvaive zvakaringana, asi zvaive zvenguva pfupi. Kuponeswa pahurwere chinhu chikuru kwatiri, asi hutano hahutipinzi Denga.
Zvino Jesu akabva atanga kutarisana nechimwe chinhu chaive chakakosha kwazvo. Kudzidzisa chokwadi. Izvi zvakakosha kwazvo nekuti zvakakoshera zvinhu zvenguva refu muhurongwa hwaMwari hweruponeso uye Hupenyu husingagumi.
Zvinotaurwa naJesu panotevera zvakasiyana nenzira yatinotarisa nayo zvinhu isu vanhu.
Panotaura Munhu Jesu, isu vanhu tinonzwa zvinhu zvakasiyana uye tinova nemuono usingatarisiriki.
RUKA 6:20 Zvino wakatarisisa vadzidzi vake; akati: Makaropafadzwa imi varombo, nokuti vushe bwaMwari ndebwenyu.
MaKristu anoramba achinamata nekushingirira kuti vaite mari zhinji. Mwari anoti zviri nani kuva varombo.
Pamharidzo ino Mwari ari kukoshesa varombo, sezvo ari kusimbira pavarombo kukunda vapfumi. Varombo vanonyanya kuvimba naMwari sezvo vainemari shoma saka vane mikana mishoma yekubuda muhurongwa hwaMwari. Munguva pfupi varombo vanoshaiwa zvinhu zvenyika ino kana magarikwa, asi Mwari anofunga zvenguva refu. Kuchawanikwa varombo vazhinji Kudenga kukunda vapfumi, nekuti nhamo yakaisa miganhu yesarudzo dzakaipa dzingaitwe nevarombo.
RUKA 6:21 Makaropafadzwa imi mune nzara zvino, nokuti muchagutswa. Makaropafadzwa imi munochema zvino, nokuti muchaseka.
Hamuna pakanyorwa muBhaibheri kuti Jesu akaseka. Vhesi pfupisa muBhaibheri rinoti “Jesu akachema”.
Mutsara uyu unotiudza kuti nyika izere nekutambudzika, marwadzo, kunyengerwa uye kurasiswa.
Chekudya chakakosha, asi chinhu chenguva duku. Chinopera nekukasika choda kutengwa zve. Tinonzwira tsitsi vane chekudya chishoma, asi Jesu anoti vakaropafadzwa. Asi handiwo maonero atinozviita. Saka tinofanira kushandura nzira yatinoona nayo zvinhu. Kutambudzika mukurarama kuno kunotiita kuti tisimbe muzvinhu zvekudenga zvekutenda, kukunda zvinhu zvepasi rino zvekuzviunganidzira pfuma nekuzvifadza.
Tinoti tiri kufara kana tichiseka, asi uyu mufaro muduku usina kwaunosvika. Kuseka kuri nyore kuuya nebudiriro yemunhu, asi kuseka hakufambidzane nekukundikana uye matambudziko.
Asi kune mufaro wechokwadi. Asi rangarirai kuti mukombe unotakura mufaro wedu unovezwa nebanga remarwadzo. Kurema nekudzama kwemitoro yatinosangana nayo, ndiko kukura kwemufaro watichazosangana nawo. Kusuwa nekurwadziwa kunokudza hunhu hwedu, sezvo zvichifambirana nezvido zvakaoma uye kushupika kwevanhu vazhinji. Kushupika nekukundwa ndidzo nyundo nembezo dzinovesa kubvisa kuneta kwese pahunhu hwedu, zvosimbisa hunhu hwedu kuti tigone kutarisana nemiyedzo yese inopotserwa kwatiri nehupenyu uye maSatani.
RUKA 6:22 Makaropafadzwa kana vanhu vachikuvengai; vachikudzingai, vachikuzvidzai, vachirasha zita renyu sechinhu chakashata; nokuda kwoMwanakomana womunhu.
Kana mukararama neBhaibheri makereke haangakudei. Kana vasingakwanisi kukukonesai neMagwaro vanosvibisa zita renyu voita kuti munzwe musingadiwi. Vanomhura huvepo hwenyu vokuvengai zvakanyanya voita chokwadi chekuti vachakubvisai mukereke mavo.
RUKA 6:23 Farai nezuva iro mupembere, nokuti tarirai, mubairo wenyu kudenga mukuru; nokuti madzibaba avo akaitira maprofita zvakadaro.
Farai nekurambwa uku. Kutaurwa zvakanaka pamusoro penyu nemakereke hachisi chinhu chakanaka. Vanhu vamwe vakapururudzira Jesu musi weSvondo achipinda muguta ndivo zvakare vakamuroverera musi weChishanu wakatevera.
Rangarirai izvi. Kana mukadzingwa mukereke, ndiyo yega nzira yekusangana naJesu munguva yekereke yekupedzisira kereke yechinomwe. Nekuti naiyewo akamira kunze kwekereke pamusuwo.
Mavhesi matatu anotevera anorayira nhungo dzinotsigira evhangeri rekubudirira. Rudo rune MaKristu rwekupfuma ndirwo runotukwa kwazvo naMwari munguva yekereke yekupedzisira kana kuti yechinomwe.
ZVAKAZARURWA 3:17 Nokuti unoti, ndakafuma ...
Hupfumi ndicho chinhu chinotsvagwa uye chinonamatirwa nemaKristu.
RUKA 6:24 Asi mune nhamo imi vafumi! Nokuti mapiwa kunyaradzwa kwenyu.
Kudonha kwaJudasi- Mari. Hupfumi hunovhura masuwo ekugarika uye mafaro. Izvi zvinongokudza kushaya maturo kwehupenyu hwemunhu. Kushandisa kwatinoita mari yakawanda, ndiko kuidawo kwatinoita zvakanyanya, uyewo kusagutsikana kukuru kunouyawo mune zvatinotenga nayo.
Mabhiriyoneya akapfuma kwazvo Alfred Krupp, John D Rockefeller naAristotle Onassis vairarama nekufema mari, asi magumo emazuva avo aive ehundoga hunosiririsa.
RUKA 6:25 Mune nhamo imi makaguta zvino; nokuti muchava nenzara. Mune nhamo imi munoseka zvino; nokuti muchachema nokurira.
Kuwa kwemagarikwa ekereke. Ndine chekudya uye ndinofara. Ndiko kufunga kwakafa kunosiririsa. Kuzvifadza kunova chinangwa chehupenyu husina maturo.
RUKA 6:26 Mune nhamo kana vanhu vose vachitaura zvakanaka pamusoro penyu! Nokuti madzibaba avo akaitira maprofita enhema zvakadaro.
Mbiri nekukudzwa. Chinhu chinonyangadza zvakadii apo vanhu vanotsvaga kuzvisimudzira musarudzo uye mumaonero evamwe vanhu. Kuwandisa kwembiri uye kuzvikudza kwakaparadza muimbi wekuItaly Mario Lanza, mutambi mune zvemafirimu Marilyn Monroe uye muimbi werudzi rwemumhanzi runonzi roch-n-roll Elvis Presley, sezvo mbiri yavo nemari yavaive vaita yakavapinza munyika izere marwadzo nekushungurudzika uye kufa vachiri vadiki.
Chinhu chikuru muhupenyu ndechekuti vanhu vanoshanda nesimba kuti vave nembiri, vopfeka maboni boni akadzima kuti vasazivikamwe.
Zvino Jesu anotaura pamusoro pehushingi uye kusimba pahunhu.
Musarwe kurwa nenzira imwechete nenyika. Ivai makazvipira kukundwa kana muchifanira kukundwa.
Kana Mwari achitonga muhupenyu hwako, zvino chinhu chese chinoitika kwauri chine chikonzero. Kunyangwe kubata kunoita vavengi chikamu chehurongwa hwaMwari muhupenyu hwako.
RUKA 6:27 Asi ndinoti kwamuri imi munonzwa: Idai vavengi venyu; muitire zvakanaka vanokuvengai.
28 Ropafadzai vanokutukai, munyengeterere vanokumhurai.
29 Unokurova padama umurinzire rimwe vo; unokutorera nguvo yokunze, usamuramba nenguvo yomukati vo.
Davidi akarwisa munondo waGoriati nechifura mabwe. Usafe wakarwisa muvengi nechombo chakafanana nechake. Ita zvakasiyana nekuti zvinenge zvisina kutarisirwa. Kana achikuvenga, iwe mude. Kana achikutuka munamatire. Kana achikurova, usadzosere. Kana akaba chinhu chimwechete, mupe chimwe. Mwari haana chaanokupa kutsiva zvakabiwa, asi unowana kubva kuna Mwari nekuti wakazopa chinhu chechipiri.
Kupa kunofadza Mwari, kwete kutora.
Iyi handiyo nzira inofunga nevanhu! Unogona kuita izvi chete kana Mwari ari mauri. Muedzo wakaoma kunge uyu wega ndiwo unokwanisa kutiudza kuti Mwari ari matiri kana kwete. Chitunha hachidzosere kunyangwe chikarohwa. Saka kana tikadzosera, hatina kufa kuzvido zvedu.
RUKA 6:30 Mumwe nomumwe unokumbira kwauri umupe; nounokutorera zvako, usazvikumbira zve kwaari.
31 Sezvamunoda kuti vanhu vakuitirei, muvaitirevo saizvozvo.
Ivai makagadzirira kupa kuvanhu. Motendawo Mwari kuti munazvo zvekupa.
Kana vanhu vakakutorerai ivai makagadzirira kurasikirwa. Tarirai, hazvisi zvinhu zvenyu zvakare. NdezvaMwari. Mwari akakuchengetesai kwemwaka, saka anenge akushandura muridzi wazvo. Uyu muyedzo wekuti tionekwe kuti takafa kuzvido zvedu here, kana musingatsamwiri kurasikirwa nezvinhu zvepasi rino. Kazhinji tine zvinhu zvizhinji kukunda zvatinoda kuva nazvo kana kuti zvatingashandise. Zvishima zvakawanda. Kukamura zvatiinazvo kunoita kuti tidzidze uye kuti tishandise zvatiinazvo nenzira yakanaka.
Mutemo mukuru ndewekuti tiitire vamwe, vakanaka kaka vakaipa, zvatinoda kuti vatiitire.
Kuitira zvakanaka munhu anokuitira zvakanaka hazvina zvazvinoreva.
RUKA 6:32 Kana muchingoda avo vanokudai, munokuvongwa kwakadiniko? Nokuti navatadzi vo vanoda vanovada.
33 Kana muchingoitira zvakanaka avo vanokuitirai zvakanaka, munokuvongwa kwakadiniko? Nokuti navatadzi vanodaro vo.
Kuitira zvakanaka munhu anokuitira zvakanaka hakusi kuedzwa
Munokwanisa here kuitira zvakanaka vanhu vanokuitirai zvakaipa? Ndiyo nzira chaiyo yehunhu hwevanhu.
RUKA 6:34 Kana muchingopa ivo chikwereti, vamunoti muchadzoserwa zve navo, munokuvongwa kwakadiniko? Nokuti vatadzi vanopa vo vatadzi chikwereti, kuti vapuwezve zvakaenzana nazvo.
Kana tikabatsira vanhu kuti vagotibatsirawo, ipapo tinenge tichingoita kunge vanhu vemunyika.
Saka hazvina zvazvinotiwanisa kubva kuna Mwari nekuti ndizvo zvinoitwa nenyika. Uye kuita izvi kuitira kuzviwanira uye kuzviunganidzira kuitira mangwana.
Zvino kunobva kwauya chinhu chinorema kwazvo kuti isu vanhu titambire:
Idai vavengi venyu muvaitire zvakanaka. Ipai musina tarisiro yekudzoserwa. Regererai zvese zvakaitika kwamuri nekuti Mwari akazvitendera nechikonzero. Taridzai tsitsi kune vasina kufanirwa nadzo.
Kakavarai asi musatongere munhu. Chero zvavanenge vaita, Mwari vaida kuti zviitwe. Mwari ari kuvashandisa kutibatsire kuti tisimbe. Tinoda hupikisi kuti tikure.
Ivai nemoyo wekupa nguva dzose. Zvakaropafadzwa kupa kukunda kugamuchira.
RUKA 6:35 Asi idai vavengi venyu muvaitire zvakanaka. Mupe chikwereti musingavori moyo, mubairo wenyu uchava mukuru mugova vanakomana vowokumusoro; nokuti iye unomoyo munyoro kunovasingavongi navakaipa.
RUKA 6:36 Ivai netsitsi, sababa venyu vane tsitsi vo.
Vanhu vanokuitira zvakaipa asi iwe unovaitira zvakanaka, izvozvo hazvisi hunhu hwemunhu chaihwo saka zvinoratidza kuti Mwari ndiye arikutonga hupenyu hwako. Vanhu vanoda kutsiva asi Mwari anoda tsitsi.
RUKA 6:37 Musatonga nemi hamungazotongwi; musapa mhaka; nemi hamungazopiwi mhaka; sunungurai nemi muchasunungurwa vo.
RUKA 6:38 Ipai, nemi muchapiwa; vachakupai pamavoko enyu chiyero chakanaka, chakatsikirirwa,chakazunguzirwa, chakaita mupfunga; nokuti nechiyero chamunoyera nacho, muchayerwa vo nacho.
Musatonge vanhu sezvo vachikwanisa kushanduka nekufamba kwehupenyu. Hatizivewo zviitiko zvese zvakakonzeresa kuita kwavo zvakaipa. Zvichida Mwari arikuvashandisa kutiumba. Zvichida tiri panguva munhorondo yeZano Guru raMwari apo zvinhu zvese izvozvo zvinofanira kuitika nekuda kwechikonzero. Saka musaraire vatadzi asi varegererei. Rangarirai, hatinawo kururama saka tinotodawo kurengererwa.
Ivai makagadzirira kupa kuti Mwari anokwanisa kukushandisai senzira yaanoshandisa kusvitsa zvinhu kune vamwe.
RUKA 6:39 Wakavavudza vomufananidzo akati: Bofu ringatungamirira rimwe bofu here? Haangawiri mugomba ose ari maviri here?
Musakasike kutevera mazano evanhu. Zviitiko zvemazuvano zvakaoma kwazvo kuti tizvirongere tega kuti tozvikunda sei.
Saka tinofanira kutevera zvatinoudzwa kuti tiite neBhaibheri. Kwatiri tiri kurarama munyika yanhasi, yambiro ndiyo nguva yekutambudzika kukuru iri kuuya.
RUKA 6:40 Mudzidzi haapfuvuri mudzidzisi wake, asi mumwe nomumwe kana akwanisa, uchava somudzidzisi wake.
Jesu, Ishe, akasangana nekushungurudzika kukuru uye kutambudzika uye kubatwa zvakaipa. Hatisi pamusoro pake, saka tinofanira kukumbira kupesana nezvaakasangana nazvo.
RUKA 6:41 Unotarireiko rubanzu ruri muziso rehama yako izvo danda riri muziso mako haurivoni?
42 Kana ungareva seiko kuhama yako, uchiti: Hama rega ndibvise rubanzu ruri muziso rako, usingavoni danda riri muziso rako? Iwe munyengeri tanga ubvise danda muziso rako, ipapo uchavonesesa kubvisa rubanzu ruri muziso rehama yako.
Tinoona kutadza kwedu kunotitevera muhupenyu hwevamwe. Zvatinotadza toviga isu, tinozviratidza mune vamwe nemufaro. Kana ndikanongedzera munwe wangu kwauri, ndine zvitatu zvakanongedzerawo ini.
RUKA 6:43 Nokuti hakunomuti wakanaka unobereka zvibereko zvakaipa; kana muti wakaipa unobereka zvibereko zvakanaka.
Kupomera, kuraira, uye kutongera vamwe zvibereko zvakaipa asi panguva imwechete tichizviyananisira. Kana ndiri munhu akanaka sezvandinotaura kuti ndiri, ngandisatonga vamwe ndichiti vakan’ora.
RUKA 6:44 Nokuti muti umwe noumwe unozivikanwa nezvibereko zvawo, nokuti vanhu havatanhi mavonde paminzwa, kana mazambiringa haatanhwi parukato.
45 Munhu wakanaka unobudisa zvakanaka pafuma yakanaka yomwoyo wake; wakaipa unobudisa zvakaipa pafuma yomwoyo wake; nokuti muromo unoreva zvizere pamwoyo.
Mumishinari wekuIrush Columba aigara achitaura chokwadi chaive muMagwaro. Zvakakosha kuudza vanhu zvinhu zvakanaka. Taurai navo kubva muBhaibheri hatizova takanyanya kurasika. Asi kuvaudza dzidziso dzakaitwa nevanhu nemafungiro evanhu, izvozvo zvakaipa.
RUKA 6:46 Munondiidzireiko Ishe! Ishe! Musingaiti zvandinoreva?
MuKristu ega ega anodaidza Jesu kuti “Ishe”. Asi izvi hazvina maturo kana tisingatendi zvakanyorwa muBhaibheri. “Ishe” zvinoreva kuti “Mukuru Mukuru” anofanira kuteererwa pasina mibvunzo.
RUKA 6:47 Mumwe nomumwe unovuya kwandiri; akanzwa mashoko angu, akaaita, ndichakuratidzai waakafanana naye:
48 Wakafanana nomunhu wakavaka imba, akachera akadzikisa, akaiteya paruware; mvura zhinji ikavuya, mvura ikarova imba iyo, ikasagona kuizunungusa, nokuti yakanga yakavakwa kwazvo.
Vakai zvamunotenda paBhaibheri. Ipapo hamuzove nekukumbira ruregerero munguva inouya. Dutu resarudzo harigoni kuparadza Gwaro kana rimwechete. Zvisinei mamiriro ezvinhu munyika anoshanduka, Bhaibheri harishanduke. Mutemo wekusingaperi usingadi kugadziriswa kana kushandurwa.
RUKA 6:49 Asi unonzwa asingaiti, wakafanana nomunhu wakavaka imba pavhu, isinenheyo, ikawa pakarepo, kuputsika kwemba iyo kukava kukuru.
Vanhu vezvesainzi vazhinji havana zvavanotenda mune zvechitendero. Vakaita hwaro hwefizikisi netsananguro yeBig Bang kuti vatsanangure kuti nyika nezvese zviri mairi zvatinoona zvakavapo pasina kana Mwari. Yaive pfungwa yakanaka kusvikira pavakazosangana neyavanodaidza kuti “Dark Energy” ne “Dark Matter” zvinoita 96% yenyika nezvese zvayo zvisingaonekwe. Havana kana fungidziro yekuti rima rese iri chii, kana kuti rinoshanda sei, kana kuti rakabvepi. Saka hwaro hwavo hwepamusoro hwangove tsananguro dzinovabatsira kutsanangura 4% yepasi rino rese, chinova chinhu chisina chiremera. Big Bang haibatsiri nekuti vanoti ine 98% yezvinhu zviri pasi rese zvinoonekwa (zvinhu zvinoonekwa ndizvo zvinoita 4% yezvinhu zviri pasi rese) munyika inooneka pamaminiti matatu ekutanga. Asi Big Bang haina zvainotaura pamusoro pe96% dzezviri panyika ino zvese zvisingaonekwe zvingoro rima.
Saka tsananguro yeBigBang yakangwara yakadonha iyezvino yakavata mumatongo sezvo vamwe vevanhu vakaitanga vepamusoro-soro vakafanana naAlan Guth nemutori wemukombe weNoble Steven Weinberg vakazvisudurudza kubva patsananguro iyi yavaimbokurudzira.
Vefizikisi varikutsvagisisa mhinduro dzakasiyana siyana asi mumakore 30 Akadarika havana humbowo hwemirayiro mitsva yefizikisi hwavakambowana.(inodaidzwa kuti Higgs boson yakaonekwa muna 2013 yaizadzisa fungidziro yakaitwa kare kare munana 1960.) Nheyo dzesainzi hadzina kusimba kunge dzimba dzakavakirwa pamabwe asi kunge dzimba dziri mujecha dzinoshanduka apo zvinhu zvitsva zvinowonekwa zvoputsa tsvagiridzo dzakambowanikwa kare. Vanhu vezvesainzi vari kuedza nzira itsva yavanodaidza kuti String Theory asi havatozivi kuti chimbori chii, uye havana ongororo dzavanogona kuita kuti vaitsigire. Saka inongoramba iri nzira isina yakano yekuti “pamwe”.
Sainzi hadzikwanisi kutsanangura zviri pasi rino nekuti 96% yezvinhu zviri pasi rino yakanyangarika kubva kusi kwemeso edu. Yavanoti Standard Model haina kubvira yakwanisa kufungidzira chavanodaidza kuti Dark Matter kana Dark Energy. Saka kana tasvika patsananguro yekuti nyika nezvese zviri mairi zvakabvepi, nyanzvi dzesainzi dzinosara dzisiri panzvimbo dzakanaka zvachose. Havana tsananguro yekutiudza kuti zvakatanga sei zvese. Havana kana tsananguro yekuti vatiudze kuti nyika nezvese zviri mairi chii.
Kana muchivimba nenyanzvi dzesainzi kuti muwane chokwadi, mucharwadziswa kwazvo pamuchaziva kuti havana chavanotozivawo, sezvo tsananguro dzavo dzakachenjera dzinoshanda pazvinhu zvishoma kwazvo zvinobuda zviri chokwadi.